စိတ်​ထားမ​ကောင်းရင်​ စိတ်​​အေးချမ်းမှု မရနိုင်​ဘူးဆိုတာ အင်​မတန်​​သေချာတဲ့ တရားပါ။ – XB Media Myanmar
စိတ်​ထားမ​ကောင်းရင်​ စိတ်​​အေးချမ်းမှု မရနိုင်​ဘူးဆိုတာ အင်​မတန်​​သေချာတဲ့ တရားပါ။
ဒီ​နေ့ အ​ကောင်းဆုံး စိတ်​ထားနဲ့ လုပ်​သင့်​တာ​တွေကိုလုပ်​မယ်​။ ငါဟာ စိတ်​​ကောင်းရှိတဲ့သူ ဖြစ်​ရမယ်​။ ဥာဏ်​ရှိတဲ့သူ ဖြစ်​တယ်​၊ သဘာဝကျကျ ​တွေးတတ်​သူ ဖြစ်​တယ်​။ မျှတတဲ့ သ​ဘောထား ရှိသူ ဖြစ်​တယ်​။ အများအကျိုးကို ​ဆောင်​ရွက်​ချင်​သူ ဖြစ်​တယ်​။
ကိုယ့်​ဘဝ အစဉ်​​ပြေချင်​ရင်​ အဲဒီက စမှဘဲရမယ်​​နော်​ တခြား​နေရာက စဖို့ စိတ်​မကူးပါနဲ့။ သဘာဝမကျဘူး သဘာဝမကျရင်​ ​ရေရှည်​ အဆင်​မ​ပြေနိုင်​ဘူး။အ​တွေး​တိုင်းဟာ မျိုး​စေ့​တွေပဲ စိတ်​ဆိုတာ ဥယျာဉ်​နဲ့တူပါတယ်​။ ဒါ​ကြောင့်​ အ​တွေး​တွေကို သတိထားပါ။ မ​တွေးသင့်​တာကို များများ​တွေးရင်​ မ​ကောင်းတဲ့ အပင်​ကို ​ရေ​လောင်း​နေတာနဲ့ တူတယ်​။
မ​ကောင်းတဲ့ မျိုး​စေ့​တွေ ကျလာရင်​ မ​ကောင်းတဲ့ အပင်​​ပေါက်​မယ်​။ ကောင်းတဲ့ မျိုး​စေ့ကျလာရင်​ ​ကောင်းတဲ့ အပင်​​ပေါက်​မယ်​။ဒါ​ကြောင့်​ ​နေ့စဉ်​ ဘယ်​လိုမျိုး​စေ့​တွေ ​ရောက်​လာ​နေသလဲ ••• ? ဆိုတာကို သတိထားဖို့လိုတယ်​။ မ​ကောင်းတဲ့ အပင်​ကို ​ရေမှန်​မှန်​​လောင်းပြီး ​မြေသြဇာ မှန်​မှန်​​ပေး​နေရင်​ မ​ကောင်းတဲ့အပင်​က သန်​လာမှာပဲ။
​ကောင်းတဲ့အပင်​ကို ​ရေမှန်​မှန်​​လောင်းပြီး ​မြေသြဇာ မှန်​မှန်​​ပေး​နေရင်​ ​ကောင်းတဲ့အပင်​က သန်​လာမှာပဲ။ ဒါ​ကြောင့်​ ဘာဘဲဖြစ်​ဖြစ်​ ကိုယ်​ဖြစ်​ချင်​တာနဲ့ တန်​တဲ့ စိတ်​ထားကို အရင်​​မွေးပါ။​စေတနာ မှန်​မှန်​ သ​ဘောထား မှန်​မှန်​ အသိအမြင်​မှန်​မှန်​နဲ့. လုပ်​မှပဲ ​ရေရှည်​ အဆင်​​ပြေပြီး စိတ်​ချမ်းသာမယ်​။ စေတနာ မမှန်​တဲ့သူ​တွေ လုပ်​ရပ်​မမှန်​တဲ့သူ​တွေ ခဏအစဉ်​​​ပြေပြီး သ်ိပ်​မကြာခင်​မှာ စိတ်​ဆင်းရဲစရာ​တွေ အမျိုးမျိုးနဲ့. ရှုပ်​​ထွေးတဲ့ဘဝကို ​နေသွားရတာ မျက်​မြင်​ ကိုယ်​​တွေ့ပဲ။
ကိုယ့်​ကိုယ်​ကို ••• ယုံကြည်​မှု မရှိ​သေးသ၍ စိတ်​​အေးချမ်းမှု မရှိနိုင်​သေးဘူး ဆိုတာကို​တော့ ​လေး​လေးနက်​နက်​ သ​ဘော​ပေါက်​မှ ဖြစ်​မယ်​​နော်​။​သေသည်​ထိ​အောင်​ တစ်​သက်​တာ စိတ်​​အေး​အေး ချမ်းချမ်း ​နေသွားနိုင်​မယ့်​ စီမံကိန်း ​ရေးဆွဲပါ။ ခဏ အဆင်​​ပြေတဲ့နည်းဟာ အတိုးနဲ့ပြန်​ဆပ်​ရ တတ်​တယ်​ ကိုယ့်​စိတ်​ကို ကိုယ်​တကယ်​ညာလို့ မရနိုင်​ပါဘူး။ စိတ်​ထားမ​ကောင်းရင်​ စိတ်​ချမ်းသာမှု မရနိုင်​ပါဘူး။
ဥာဏ်​နည်းတဲ့သူဟာ ရုပ်​ပိုင်းကို ဦးစား​ပေးတယ်​။ ဥာဏ်​ပညာ ရင့်​ကျက်​တဲ့သူဟာ စိတ်​ပိုင်​ကို… ဦးစား​ပေးတယ်​။ ကိုယ်ပတ်​ဝန်းကျင်​မှာကိုယ်​သိတဲ့သူ​တွေကို ​လေ့လာကြည့်​ပါ၊ ဘယ်​လိုလူမျိုးဟာ စိတ်​​အေးချမ်းသလဲ၊ ​ငွေ ၊ ဂုဏ်​ ၊ ရာထူး ၊ ပစ္စည်းဥစ္စာ ၊ ​ကျော်​ကြားမှု စတဲ့ ပြင်​ပ​တွေကို ဦးစား​ပေးတဲ့သူ စိတ်​ချမ်းသာမှု မရကြပါဘူး။ စိတ်​ထားမ​ကောင်းရင်​ စိတ်​​အေးချမ်းမှု မရနိုင်​ဘူးဆိုတာ အင်​မတန်​​သေချာတဲ့ တရားပါ။ မလွဲပါဘူး
ပရိသတ်တွေ ရှေ့မှောက်ကို မကြာခင်ရောက်လာတော့မယ့် ဇဏ်ခီ နဲ့ ပိုင်ဖြိုးသု တို့ရဲ့ ထာဝရနှောင်ကြိုး
စီနီယာအနုပညာရှင်တွေထက် ပေါ်လွင်သွားမှာစိုးတဲ့အတွက် အကယ်ဒမီပွဲကို သာမာန်ဝတ်စုံသာဝတ်ခဲ့တဲ့ ကျော်ကျော်နန္ဒ